Mashandisiro Aungaita Bhizinesi Rako Risingazivikanwe Vashanyi Vepamhepo Vanoitisa | Martech Zone
Muvhuro, October 13, 2014 Chipiri, June 16, 2015 Douglas Karr
Kwegore rapfuura, takaedza mhinduro dzakasiyana dzevatengi vedu veB2B kuti vanyatsoona vashanyi vewebhusaiti. Vanhu vari kushanyira yako saiti mazuva ese - vatengi, vatungamiriri, vakwikwidzi, uye kunyangwe midhiya - asi zvakajairika analytics haisi kupa nzwisiso mumabhizimusi iwayo. Nguva imwe neimwe munhu paanoshanyira webhusaiti yako, nzvimbo yavo inogona kuzivikanwa ne IP kero Iyo IP kero inogona kuunganidzwa neyechitatu bato mhinduro, kuzivikanwa kunowedzerwa, uye ruzivo rwunotumirwa kwauri semutungamiri.
Mimwe yemhinduro dzataive nadzo dzaive dzichishanda kubva kudhara dhata, dzimwe dzaive nematanho anotyisa, mamwe akange asina sarudzo dzekuvandudza mishumo… zvaishungurudza. Isu takatosaina kondirakiti yemhinduro imwe isina kumbobvira yagadzirisa yavo data kana interface uye havazotibvumire kubuda muchibvumirano chedu. Seizvo vanhu vekuDemandbase vakanyora, Kuzivikanwa kwekambani kwakanyanyisa kupfuura iwe zvaunofunga.
98% yevashanyi kumawebhusaiti eB2B usamborega kusaina kana kushandura kuti usazive kuti makambani aive kupi pane yako saiti kana izvo zvavanogona kunge vachitsvaga. Premier mhinduro senge Demandbase inotopa mukana wekuita zvemukati zvinoenderana nekambani iri kushanyira yako saiti - inotonhorera.
B2B makambani ari kuona zvinoshamisa mhedzisiro nekushandisa masevhisi seDemandbase. Chiitiko pane webhusaiti yako uye nekutsvagisa kwakabatana kwakaunza makambani ikoko kunobatsira kutungamira zvibodzwa, kukoshesa, uye nzwisiso yezvingave zvichitarisirwa nemutengi kana mutengi. Iko kugona kwekuona iyi data mune chaiyo-nguva kunogona kubatsira yako inobuda timu kusangana netarisiro kana iyo nguva iri yakakosha - sezvo ivo vari kutsvaga zvigadzirwa zvako kana masevhisi.
Chiitiko chevashanyi chinogona zvakare kuita chenjedzo, kunyorwa muCustomer Relationship Marketing (CRM) masisitimu seSalesforce, uye kunyangwe kuitisa mishandirapamwe yekurera. Iyi tekinoroji ine simba iyo inofanirwa kuisa mari mairi.
Tags: bhizinesi ip kutarisashandura inotungamiraZiva zvinotungamirakuziva vashanyiwedzera kutendeukaInfusionsoftip kutarisamicrosoft dynamics crmsalesforceSugarCRMwebhusaiti mushanyi kuzivikanwaMabhuku Anoshanda.comZoho